November 2015 | EDUCATION NETWORK
Programming, Design, Online Marketing, Communication, Writing, Law အစရှိသဖြင့် ဘာသာရပ် အသီးသီးများကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အခမဲ့ လေ့လာခွင့်ရအောင် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကြီးများနဲ့ အွန်လိုင်း သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေး ပလက်ဖောင်းများက အခမဲ့ ပေးထားပါတယ်။ ယင်းသင်တန်းများထဲမှ မိမိနှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်တတ်မြောက်နိုင်ပြီး ယနေ့ခေတ်အားဖြင့် ကြည့်ရင် အားလုံးကို သိထားတတ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ C-programming ကို မရေးတတ်ရင်တောင် ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့အတွက် Intro class, Java ဆိုတာ ဘာလဲ သိအောင် intro class အစ/ရှိသဖြင့်တို့ ရှိပြီး နက်နက်နဲနဲ လေ့လာချင်သူများအတွက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Law နဲ့ Online Marketing တို့မှာဆိုရင် Diploma ပေးတဲ့အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရိုးရာလေး စာဖတ်သူများအတွက် အခမဲ့ လေ့လာလိုက်စားလို့ရနိုင်အောင် Link များဖြင့် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
Duration: 40 Minutes / 1 Lesson
28. Business Communication — Fundamentals of Business
အှနျလိုငျးပျေါမှာ အခမဲ့ တကျနိုငျတဲ့ ဒီပလိုမာနှငျ့ အခွား အသိမှတျပွု သငျတနျးပေါငျး ၄၅ ခု
Programming, Design, Online Marketing, Communication, Writing, Law အစရှိသဖွငျ့ ဘာသာရပျ အသီးသီးမြားကို အှနျလိုငျးပျေါကနေ အခမဲ့ လလေ့ာခှငျ့ရအောငျ နိုငျငံတကာ တက်ကသိုလျကွီးမြားနဲ့ အှနျလိုငျး သငျကွားလကေ့ငျြ့ရေး ပလကျဖောငျးမြားက အခမဲ့ ပေးထားပါတယျ။ ယငျးသငျတနျးမြားထဲမှ မိမိနှဈသကျရာကို ရှေးခယျြတတျမွောကျနိုငျပွီး ယနခေ့တျေအားဖွငျ့ ကွညျ့ရငျ အားလုံးကို သိထားတတျထားရနျလိုအပျပါတယျ။ ဥပမာ C-programming ကို မရေးတတျရငျတောငျ ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့အတှကျ Intro class, Java ဆိုတာ ဘာလဲ သိအောငျ intro class အစ/ရှိသဖွငျ့တို့ ရှိပွီး နကျနကျနဲနဲ လလေ့ာခငျြသူမြားအတှကျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ Law နဲ့ Online Marketing တို့မှာဆိုရငျ Diploma ပေးတဲ့အထိ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ရိုးရာလေး စာဖတျသူမြားအတှကျ အခမဲ့ လလေ့ာလိုကျစားလို့ရနိုငျအောငျ Link မြားဖွငျ့ မြှဝပေေးလိုကျရပါတယျ။
Posted by Nwawt seng at 7:15 PM0comments
Labels: education, I-Technology
ဘ၀မှာ တခါတလေ `အဲဒါလေး ငါတတ်ရင် ကောင်းမှာပဲ´လို့ စိတ်ကူးမိတဲ့ အခါတွေ ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မရှိ၊ အဆက်အသွယ် မရှိတဲ့သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင်နိုင်တဲ့ ပညာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲသည်အထဲက ၁၀ မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ပစ္စည်းတွေ ပျက်ရင် ပြင်တာ
အိမ်ပြင်တာ၊ ကားပြင်တာ၊ ရေပိုက်ပြင်တာ၊ ပစ္စည်းအတိုအထွာ ပြင်တာ..ဘာမဆို youtube ပေါ်မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လက်တော့ပ်ကြိုးလိုမျိုး အသေးစားပြင်ဆင်မှုတွေကို ကိုယ့်ဘာသာလုပ်နိုင်အောင် ဒီဆိုက်မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၂. ကွန်ပျူတာပန်းချီဆွဲတာ၊ photoshop သုံးတာ
ကွန်ပျူတာထဲက အခြေခံ tool တွေကို အရင် သုံးကြည့်ပါ။ ဘာက ဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်လေးတွေ ပရိုဂရမ်တိုင်းမှာ ထည့်ပြီးသားပါ။ Tool တွေကို ရင်းနှီးပြီဆို ပုံပေါ်လာအောင် ဆွဲတဲ့နည်းကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆိုက်အပြင် www.photoshopstar.com ဟာလည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အခြေခံကစ သင်ပေးတဲ့ ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုပါ။
လူတိုင်းကို ယုံကြည်လို့မရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကျားမ မရွေး ကိုယ်ခံပညာတတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ငြိမ်ခံနေတာထက် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တတ်သူကို မသမာသူတွေ ပိုဖြုံကြတာလည်း အသေအချာပါပဲ။ လေ့လာချင်ရင် http://lifehacker.com/5825528/basic-self-defense-moves-anyone-can-do-and-everyone-should-know မှာ ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နည်း၊ ရန်သူရဲ့ ဟာကွက်ကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်နည်းတွေ တွေ့ရမှာပါ။
၀က်ဘ်ဒီဇိုင်း၊ အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း စတာတွေကို အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို နားလည်ထားတဲ့လူဟာ သူများထက်တော့ ခြေတစ်လှမ်းသာနေမှာပါပဲ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် မရောက်ရင်တောင် ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းက စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်မှာပါ။ အိမ်အတွင်းပိုင်းအတွက် http://lifehacker.com/5888862/how-can-i-turn-my-boring-home-into-an-awesome-well-designed-one-on-the-cheapမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၅. ကောလိပ်တုန်းက မသင်လိုက်ရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာတာ
သိပ္ပံ၊ စီးပွားရေး၊ သင်္ချာ၊ ဥပဒေ ဘယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်ဖြစ် ကောလိပ်တုန်းက မသင်လိုက်ရတာတွေကို ပြန်လေ့လာချင်တယ်ဆိုပါစို့။ အခမဲ့တက္ကသီလာကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ကြီး ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းဆိုပြီး အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ်အားထုတ်ရင် အားထုတ်သလောက် ပညာရနိုင်တဲ့ ဆိုက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်း အားသာချက်တွေဖြစ်တဲ့ ပိုက်ဆံမကုန်တာ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်သလောက် လေ့လာနိုင်တာတွေကိုတော့ ထည့်ပြောဖို့ မလိုတော့ပါဘူးနော်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် တက်ဖူးပြီး တိုက်တွန်းချင်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခုက www.alison.comပါ။http://lifehacker.com/tag/lifehacker-u မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၆. အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို တည်ဆောက်တာ၊ ဟက်တာ
နည်းပညာက ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သူ့ကို စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်လို့ရရင် ပိုပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပါ။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဟက်ဖို့ဆို ပစ္စည်းတွေအကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့ လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆင်တာကို စလေ့လာကြရင် မကောင်းဘူးလား။
http://lifehacker.com/5828747/how-to-build-a-computer-from-scratch-the-complete-guide?tag=nightschoolမှာ တစ်စစီဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကနေ ကွန်ပျူတာဖြစ်အောင် တပ်ဆင်နည်းကို လေ့လာနိုင်မှာပါ။ တခြားအီလက်ထရောနစ်တွေကို http://lifehacker.com/5875365/how-to-start-making-your--electronics-with-arduino-and-other-peoples-code ကြည့်ပြီး တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ http://lifehacker.com/tag/arduino မှာလည်း ရှိပါတယ်။
၇. တူရိယာတီးခတ်တတ်အောင် သင်တာ
တူရိယာ အသစ်တစ်မျိုးကို တီးခတ်ချင်ရင် အွန်လိုင်းမှာ သင်နိုင်တဲ့ နေရာအများကြီးပါပဲ။ ဂစ်တာတီးသင်မလား
http://www.justinguitar.com မှာ ဂစ်တာသင်ခန်းစာ ၈၀၀ ကျော်ရှ်ိပါတယ်။ http://lifehacker.com/391435/learn-to-play-an-instrument-online မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စန္ဒယားတီးသင်ဖို့ https://m.youtube.com/watch?v=vphWgqbF-AM မှာရှိတယ်။ ဒရမ်တီးဖို့ https://m.youtube.com/watch?v=k_gsp5KwM-k မှာ ကြည့်နိုင်တယ်။ ဒါတင်မက ပလွေမှုတ်တာအတွက် https://m.youtube.com/watch?v=SAvA5E1Ttek ၊ တယောအတွက်
https://m.youtube.com/watch?v=GbuJ3qnmBmQ ရှိတယ်။ Youtube နဲ့ Videojug မှာလည်း တူရိယာပေါင်းစုံတီးခတ်နည်းတွေကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၈. စားဖိုမှူးတစ်ယောက်လို ချက်တာ
ဟင်းချက်နည်းတွေ၊ ချက်ပြတဲ့အစီအစဉ်တွေ ဘယ်လောက်များများ လူတိုင်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စားဖ်ိုမှူးဖြစ်မလာကြပါဘူး။ စားဖိုမှူးလုပ်တော့မယ်ဆို သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေကို http://lifehacker.com/5852325/top-10-things-every-budding-foodie-should-know ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာဟင်း၊ တရုတ်ဟင်း စတဲ့ ဟင်းအမျိုးမျိုးအတွက် www.wutyeefoodhouse၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
https://m.facebook.com/KaeKaeFoodPalace?_rdr တို့ဟာ ထင်ရှားပြီး အနောက်တိုင်းဟင်းတွေအတွက် http://lifehacker.com/5838661/10%252B-dishes-and-drinks-everyone-should-know-how-to-make-at-home-including-you မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာလည်း မြန်မာဟင်းချက်နည်းတွေ အများအပြားရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
၉. ဘာသာစကားအသစ်ကို လေ့လာတာ
လူတွေကို ဘာကို လေ့လာချင်သလဲလို့ မေးတဲ့အခါ အင်္ဂင်္လိပ်စကားအပါအဝင် ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာဖို့ လူတော်တော်များများက စိတ်အဝင်စားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ တချို့က သင်တန်းသာ တက်တယ်၊ သင်တန်းပြီးတော့ ဘာမှ မကျန်ခဲ့ဘူးဆိုပြီး ပြောတတ်ပါတယ်။ ဘယ်စကါးကို လေ့လာတာဖြစ်ဖြစ် ဘာသာစကားလေ့လာရာမှာ နည်းစနစ်တော့ ရှိရပါမယ်။ အဲသည်နည်းစနစ်ကို http://lifehacker.com/5903288/i-learned-to-speak-four-languages-in-a-few-years-heres-how မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို သင်တန်းပဲ တက်တက်၊ အပြင်ကပဲ လေ့လာလေ့လာ ထိရောက်ပါပြီ။ တစ်ခုရှိတာက ဘာသာစကားဆိုတာ ပြောနေမှ ထွက်တာဖြစ်လို့ အမြဲသုံးနေဖို့တော့ လိုပါတယ်။
၁၀. ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆွဲတာ၊ အက်ပ်ရေးတာ၊ ပရိုဂရမ်ရေးတာ
ကုတ်ဒ်ရေးတတ်အောင် သင်ယူတာဟာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆွဲဖို့၊ အက်ပ်ရေးဖို့ရဲ့ အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ Beginner တွေအတွက် learn ___ the hard way ဆိုတဲ့ စကားစုကိုသုံးပြီး ရှာဖွေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကွက်လပ်မှာ ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့ code ကို ထည့်ပေါ့။ ဥပမာ python ကို လေ့လာချင်ရင် learn python the hard way လို့ရှာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ ဆိုက်ကိုမှ ကြိုက်ရင် www.codecademy.com မှာ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Coding ကို ဒီအတိုင်း လေ့လာရင် ပျင်းစရာကောင်းတာမို့ ပရောဂျက်တစ်ခုလုပ်ပြီး လေ့လာဖို့လည်း အကြံပြုပါရစေ။
ဒါကတော့ သင်တန်းမတက်ဘဲ အွန်လိုင်းကနေ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှု ၁၀ မျိုးပါပဲ။ အွန်လိုင်းဆိုတာ ဂိမ်းဆော့ဖို့၊ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးဖို့၊ ချက်ဖို့ပဲ အသုံးဝင်တာမဟုတ်ကြောင်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာတဲ့ ကိုယ့်အရည်အသွေးတွေက သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။
သငျတနျးမတကျဘဲ အှနျလိုငျးကနေ တတျမွောကျနိုငျတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ကြှမျးကငျြမှုမြား . ၁ + ၂
ဘဝမှာ တခါတလေ `အဲဒါလေး ငါတတျရငျ ကောငျးမှာပဲ´လို့ စိတျကူးမိတဲ့ အခါတှေ ရှိပါတယျ။ သငျတနျးတကျဖို့ အခြိနျမရှိ၊ အဆကျအသှယျ မရှိတဲ့သူတှအေတှကျ အှနျလိုငျးပျေါမှာ သငျနိုငျတဲ့ ပညာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲသညျအထဲက ၁၀ မြိုးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. ပစ်စညျးတှေ ပကျြရငျ ပွငျတာ
အိမျပွငျတာ၊ ကားပွငျတာ၊ ရပေိုကျပွငျတာ၊ ပစ်စညျးအတိုအထှာ ပွငျတာ..ဘာမဆို youtube ပျေါမှာ ရှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။ လကျတော့ပျကွိုးလိုမြိုး အသေးစားပွငျဆငျမှုတှကေို ကိုယျ့ဘာသာလုပျနိုငျအောငျ ဒီဆိုကျမှာလညျး ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၂. ကှနျပြူတာပနျးခြီဆှဲတာ၊ photoshop သုံးတာ
ကှနျပြူတာထဲက အခွခေံ tool တှကေို အရငျ သုံးကွညျ့ပါ။ ဘာက ဘာအတှကျသုံးတယျဆိုတဲ့ လမျးညှနျလေးတှေ ပရိုဂရမျတိုငျးမှာ ထညျ့ပွီးသားပါ။ Tool တှကေို ရငျးနှီးပွီဆို ပုံပျေါလာအောငျ ဆှဲတဲ့နညျးကို ဒီနရောမှာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
ဒီဆိုကျအပွငျ www.photoshopstar.com ဟာလညျး လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို အခွခေံကစ သငျပေးတဲ့ ဆိုကျကောငျးတဈခုပါ။
လူတိုငျးကို ယုံကွညျလို့မရတဲ့ ခတျေကွီးမှာ ကြားမ မရှေး ကိုယျခံပညာတတျထားသငျ့ပါတယျ။ ငွိမျခံနတောထကျ တနျပွနျတိုကျခိုကျတတျသူကို မသမာသူတှေ ပိုဖွုံကွတာလညျး အသအေခြာပါပဲ။ လလေ့ာခငျြရငျ http://lifehacker.com/…/digital-painting-101-the-complete-g… မှာ ကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ကာကှယျနညျး၊ ရနျသူရဲ့ ဟာကှကျကို ရှာဖှတေိုကျခိုကျနညျးတှေ တှရေ့မှာပါ။
ဝကျဘျဒီဇိုငျး၊ အိမျအတှငျးပိုငျးဒီဇိုငျး စတာတှကေို အှနျလိုငျးကနေ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါတယျ။ ဒီဇိုငျးပိုငျးကို နားလညျထားတဲ့လူဟာ သူမြားထကျတော့ ခွတေဈလှမျးသာနမှောပါပဲ။ ပရျောဖကျရှငျနယျအဆငျ့ မရောကျရငျတောငျ ကိုယျ့စိတျကူးလေးနဲ့ဖနျတီးထားတဲ့ ဒီဇိုငျးက စိတျကနြေပျမှု ပေးနိုငျမှာပါ။ အိမျအတှငျးပိုငျးအတှကျ http://lifehacker.com/…/how-can-i-turn-my-boring-home-into-… မှာ လလေ့ာနိုငျပွီး ဝကျဘျဒီဇိုငျးအတှကျ http://lifehacker.com/…/basics-of-photoshop-designing-a-web… မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၅. ကောလိပျတုနျးက မသငျလိုကျရတဲ့ ဘာသာရပျတှကေို လလေ့ာတာ
သိပ်ပံ၊ စီးပှားရေး၊ သင်ျခြာ၊ ဥပဒေ ဘယျဘာသာရပျဖွဈဖွဈ ကောလိပျတုနျးက မသငျလိုကျရတာတှကေို ပွနျလလေ့ာခငျြတယျဆိုပါစို့။ အခမဲ့တက်ကသီလာကြောငျးတျောကွီးဖွဈတဲ့ အငျတာနကျကွီး ရှိပါတယျ။ အှနျလိုငျးဆိုပွီး အထငျမသေးလိုကျပါနဲ့။ ကိုယျအားထုတျရငျ အားထုတျသလောကျ ပညာရနိုငျတဲ့ ဆိုကျတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အှနျလိုငျး အားသာခကျြတှဖွေဈတဲ့ ပိုကျဆံမကုနျတာ၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့အခြိနျ ကွိုကျသလောကျ လလေ့ာနိုငျတာတှကေိုတော့ ထညျ့ပွောဖို့ မလိုတော့ပါဘူးနျော။ ကြှနျမကိုယျတိုငျ တကျဖူးပွီး တိုကျတှနျးခငျြတဲ့ ဆိုကျတဈခုက www.alison.comပါ။http://lifehacker.com/tag/lifehacker-u မှာလညျး ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၆. အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတှကေို တညျဆောကျတာ၊ ဟကျတာ
နညျးပညာက ကြှနျမတို့ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈလာပွီး သူ့ကို စိတျကွိုကျ ပွငျဆငျလို့ရရငျ ပိုပြျောဖို့ ကောငျးမှာပါ။ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတဈခုကို ဟကျဖို့ဆို ပစ်စညျးတှအေကွောငျး ထဲထဲဝငျဝငျသိဖို့ လိုပါတယျ။ ကှနျပြူတာဆငျတာကို စလလေ့ာကွရငျ မကောငျးဘူးလား။
http://lifehacker.com/5828747/how-to-build-a-computer-from-scratch-the-complete-guide?tag=nightschoolမှာ တဈစစီဖွဈနတေဲ့ ပစ်စညျးတှကေနေ ကှနျပြူတာဖွဈအောငျ တပျဆငျနညျးကို လလေ့ာနိုငျမှာပါ။ တခွားအီလကျထရောနဈတကို http://lifehacker.com/5875365/how-to-start-making-your--electronics-with-arduino-and-other-peoples-code ကွညျ့ပွီး တပျဆငျနိုငျပါတယျ။ http://lifehacker.com/tag/arduino မှာလညျး ရှိပါတယျ။
၇. တူရိယာတီးခတျတတျအောငျ သငျတာ
တူရိယာ အသဈတဈမြိုးကို တီးခတျခငျြရငျ အှနျလိုငျးမှာ သငျနိုငျတဲ့ နရောအမြားကွီးပါပဲ။ ဂဈတာတီးသငျမလား
http://www.justinguitar.com မှာ ဂဈတာသငျခနျးစာ ၈၀၀ ကြျောရျှိပါတယျ။ http://lifehacker.com/391435/learn-to-play-an-instrument-online မှာလညျး ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ စန်ဒယားတီးသငျဖို့https://m.youtube.com/watch?v=vphWgqbF-AM မှာရှိတယျ။ ဒရမျတီးဖို့ https://m.youtube.com/watch?v=k_gsp5KwM-k မှာ ကွညျ့နိုငျတယျ။ ဒါတငျမက ပလှမှေုတျတာအတှကျhttps://m.youtube.com/watch?v=SAvA5E1Ttek ၊ တယောအတှကျ
https://m.youtube.com/watch?v=GbuJ3qnmBmQ ရှိတယျ။ Youtube နဲ့ Videojug မှာလညျး တူရိယာပေါငျးစုံတီးခတျနညျးတှကေို ကွညျ့ရှုလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
၈. စားဖိုမှူးတဈယောကျလို ခကျြတာ
ဟငျးခကျြနညျးတှေ၊ ခကျြပွတဲ့အစီအစဉျတှေ ဘယျလောကျမြားမြား လူတိုငျးက ပရျောဖကျရှငျနယျ စားဖျိုမှူးဖွဈမလာကွပါဘူး။ စားဖိုမှူးလုပျတော့မယျဆို သိသငျ့သိထိုကျတဲ့ အခကျြတှကေိုhttp://lifehacker.com/5852325/top-10-things-every-budding-foodie-should-know ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ မွနျမာဟငျး၊ တရုတျဟငျး စတဲ့ ဟငျးအမြိုးမြိုးအတှကျ www.wutyeefoodhouse၊ ဖစျေ့ဘုတျပျေါမှာ
https://m.facebook.com/KaeKaeFoodPalace?_rdr တို့ဟာ ထငျရှားပွီး အနောကျတိုငျးဟငျးတှအေတှကျhttp://lifehacker.com/5838661/10%252B-dishes-and-drinks-everyone-should-know-how-to-make-at-home-including-you မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဖစျေ့ဘုတျပျေါမှာလညျး မွနျမာဟငျးခကျြနညျးတှေ အမြားအပွားရှာတှနေို့ငျပါတယျ။
၉. ဘာသာစကားအသဈကို လလေ့ာတာ
လူတှကေို ဘာကို လလေ့ာခငျြသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ အင်ျဂင်ျလိပျစကားအပါအဝငျ ဘာသာစကားတဈခုကို လလေ့ာဖို့ လူတျောတျောမြားမြားက စိတျအဝငျစားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။ တခြို့က သငျတနျးသာ တကျတယျ၊ သငျတနျးပွီးတော့ ဘာမှ မကနျြခဲ့ဘူးဆိုပွီး ပွောတတျပါတယျ။ ဘယျစကါးကို လလေ့ာတာဖွဈဖွဈ ဘာသာစကားလလေ့ာရာမှာ နညျးစနဈတော့ ရှိရပါမယျ။ အဲသညျနညျးစနဈကို http://lifehacker.com/5903288/i-learned-to-speak-four-languages-in-a-few-years-heres-how မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒါဆို သငျတနျးပဲ တကျတကျ၊ အပွငျကပဲ လလေ့ာလလေ့ာ ထိရောကျပါပွီ။ တဈခုရှိတာက ဘာသာစကားဆိုတာ ပွောနမှေ ထှကျတာဖွဈလို့ အမွဲသုံးနဖေို့တော့ လိုပါတယျ။
၁၀. ဝကျဘျဆိုကျဆှဲတာ၊ အကျပျရေးတာ၊ ပရိုဂရမျရေးတာ
ကုတျဒျရေးတတျအောငျ သငျယူတာဟာ ဝကျဘျဆိုကျဆှဲဖို့၊ အကျပျရေးဖို့ရဲ့ အခွခေံဖွဈပါတယျ။ Beginner တှအေတှကျ learn ___ the hard way ဆိုတဲ့ စကားစုကိုသုံးပွီး ရှာဖှတော အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကှကျလပျမှာ ကိုယျလလေ့ာခငျြတဲ့ code ကို ထညျ့ပေါ့။ ဥပမာ python ကို လလေ့ာခငျြရငျ learn python the hard way လို့ရှာနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ အပွနျအလှနျတုံ့ပွနျနိုငျတဲ့ ဆိုကျကိုမှ ကွိုကျရငျwww.codecademy.com မှာ အခမဲ့ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ Coding ကို ဒီအတိုငျး လလေ့ာရငျ ပငျြးစရာကောငျးတာမို့ ပရောဂကျြတဈခုလုပျပွီး လလေ့ာဖို့လညျး အကွံပွုပါရစေ။
ဒါကတော့ သငျတနျးမတကျဘဲ အှနျလိုငျးကနေ တတျမွောကျနိုငျတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ကြှမျးကငျြမှု ၁၀ မြိုးပါပဲ။ အှနျလိုငျးဆိုတာ ဂိမျးဆော့ဖို့၊ ဖစျေ့ဘုတျသုံးဖို့၊ ခကျြဖို့ပဲ အသုံးဝငျတာမဟုတျကွောငျး တဖွညျးဖွညျး မွငျ့တကျလာတဲ့ ကိုယျ့အရညျအသှေးတှကေ သကျသပွေပါလိမျ့မယျ။
Posted by Nwawt seng at 7:14 PM0comments
APPLIED ENGLISH ( LEVEL – 1 ) A
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အခမဲ့ တက်နိုင်တဲ့ ဒီပလိုမာနှင့် အ...
သင်တန်းမတက်ဘဲ အွန်လိုင်းကနေ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အဆင့...